Carambola any Thailand " Journey-Assist - Starfruit. Vokatry ny Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Carambola any Thailand
Carambola, starfruit (anarana Thai ma-fuang)
Sarintanin'ireo fizahan-tany sy torapasika Thailand
Sarintany ankapobeny amin'ny fisintonana Thailand
30 Aogositra, 2019
Carabola dia voankazo malaza indrindra amin'ny endriny tsy mahazatra. Ny voankazo oblong amin'ny faritra miampita dia manana endrika sarina kintana ary na ny lokony aza dia mety tsara - manomboka amin'ny maitso malemy ka manankarena mavo ary misy voasary mihitsy aza. ny haingam-paritany dia tena mitovy amin'ny dipoavatra amin'ny mahazatra salady.
Ny tsirony, ny andiany iraisan'ny mpiara-miombon'antoka dia manondro voan-kesika, kiwi ary paoma, saingy "malefaka" noho izany.
Noho ny endriny tsy mahazatra ary ny fanandramana mahafinaritra tsy manam-paharoa, ny carambola dia ampiasaina mavitrika ho toy ny haingo ho an'ny lovia isan-karazany sy ny salady anatiny Sakafo Thai.
Ary mahaliana fa ny tompon-trano Thailandey manosotra ny varahina vita amin'ny varahina sy ny varahina miaraka amin'ny sombin-tsolika tsy misy fambolena, izay manome azy ireo hazavana voajanahary, ary azonao atao koa ny mampiasa ranom-boankazo tsy nasiana tsimbadika ho an'ny lamba sy akanjo, satria ny fiforonan'ny foetus dia misy asidra oxalic.
Ny sandan'ny Carambola any Thailand
Ny vidin'ny carambola any Thailandy dia eo amin'ny 30 baht.
Vanim-potoana Karambol ao Thailand
Ny vanim-potoanan'ny carambola dia mifanandrify amin'ny vanim-potoana faran'ny voankazo ary maharitra hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Aogositra.
Ahoana ny fitahirizana carambola
Azonao atao ny mitahiry kambola ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 3 herinandro.
Ary koa, raha mividy carambola tsy loaka ianao, avelanao avelao amin'ny mari-pana raha handro. Ho lasa mamy kokoa hanandrana izany, saingy mbola tsy toy ny hoe masaka eo ambanin'ny fepetra voajanahary eo amin'ny hazo iray.
Fomba hisafidianana karambola
Ny voankazo masaka dia voasarona amin'ny taolan-tehezana sy ny felana volontsôkôlà mainty, izay mariky ny fahamatorana.
Ny voankazo karambola tsy matsiro (tsara ho an'ny salady na ho toy ny haingon-trano) dia azo fantarina amin'ny taolan-tehezana tery sy voafaritra mazava.
Eny, tsy tokony ho fatiantoka ny tany, tsy dia misy tranga tsy ampoizina sy zavatra hafa.
Ny carambolas maitso maitso dia manana tsiro masira, ary ny mavo mavo amin'ny volontsôkôlà misy tsirony dia manandrana mamy.
Ahoana ny fanadiovana carambola
Fototra rehetra. Toy ny fitsipika, ny carambola dia sasana tsara ary hokapaina kintana manify. Tsy misy peeling. Izany no izy raha natao ho an'ny sakafo na haingo ny voankazo.
Carambola dia azo voky tanteraka. Azonao atao ny tsy mahazaka ny voanjo, na avy amin'ny voa kely.
Mampiavaka ny carambola
Tany Azia, ny karmabolu (sy ny voankazo ary ny ravina ary ny voninkazo) dia ampiasaina amin'ny mavitrika amin'ny fanaovana profil sy mitsaboana aretina isan-karazany.
Manampy amin'ny fanamaivanana na hanaisotra ny aretin'andoha, aretin-tenda sy ny fihinana.
Ary koa amin'ny fitsaboana ny aretim-pivalanana sy ny aretin'ny vony.
Carambola dia manampy amin'ny fihenan'ny hypertension sy ny hoditra.
Amin'ny maha-karambola azy, ny asidra ascorbic dia be dia be, izay midika fa ny fampiasana an'ity voankazo ity dia manamafy ny hery fiarovana, ary manangana ny feo ankapobeny amin'ny vatana.
Ny vitamina B1, dia misy fiatraikany mahasoa amin'ny fiasan'ny rafi-pandevonan-kanina, ary manamafy ny rafi-pitabatabana.
Ny otrikaina B5 dia tena mahasoa amin'ny ra - manara-penitra ny votoatin'ny hemoglobin sy kolesterola ao anaty ra. Teny an-dalana, ho lasa prophylactic tsara manohitra ny aretim-po sy ny vascular.
Hatao amin'ny carambola
Ny voankazo dia misy asidra oxalic be loatra, izay midika izany fa tsy averina atao betsaka amin'ny olona manana aretim-bavony (gastritis, fery).
Carambola mavesatra be loatra ny voa, ka noho izany ny fampiasana azy dia tsy naratra ho an'ny olona manana aretin'andoha.
Na ahoana na ahoana, ny voankazo dia manana vitamina sy mineraly be dia be ho an'ny vatana, fa toy ny zava-drehetra ilaina, ny zava-dehibe dia ny tsy hanararaotra izany ary hahafantatra ny zava-drehetra momba ny fepetra.
Thailand dia manankarena amin'ny vidiny sy ny fotoany
Teo amin'ny latabatra, ny mazava kokoa voasary lokony, ny lehibe kokoa amin'ny vanim-potoana fara tampony, ary noho izany dia ambany ny vidiny. Amin'ny vanim-potoana tsy fahita, mitombo 2 na mihoatra ny vidiny!